Ungazenza njani ii-imeyile zakho zokufikelela ukuze ufumane iimpendulo ezilungileyo | Martech Zone
Wonke umthengisi uyazi ukuba abathengi banamhlanje bafuna amava awodwa; ukuba abasenelisekanga nje ngokuba lelinye inani phakathi kwamawaka eerekhodi zokufaka ii-invoyisi. Ngapha koko, inkampani yophando kaMcKinsey iqikelela ukuba ukwenza ifayile ye- amava okuthenga inokunyusa ingeniso ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30. Nangona kunjalo, ngelixa abathengisi banokuthi benze umzamo wokunxibelelana ngokufanelekileyo nabathengi babo, uninzi lwabo alusebenzisi indlela efanayo yokufikelela kwabo kwi-imeyile.
Ukuba abathengi bafuna ubuqu, kunokucingelwa ngokufanelekileyo ukuba abachaphazeli, iibhlog, kunye nabanini bewebhusayithi bayakukhangela amava afanayo. Ukwenza ubuqu kuvakale njengesisombululo esilula ukuphucula inqanaba lokuphendula, akunjalo? Ngokuqinisekileyo. Kodwa ukwenza ubuntu kwi-imeyile ukufikelela kunokwahluka kakhulu kubuntu kwintengiso yabathengi, yiyo loo nto abanye abathengisi bengenakho ukubona impumelelo ecacileyo.
Kwintengiso yabathengi, abathengisi kunokwenzeka ukuba bahlule oonxibelelwano kwaye benze ukhetho oluncinci lwe-imeyile ukubhenela kubo bonke abamkeli kwiqela. Kwimikhankaso yokufikelela, nangona kunjalo, ukwahlula-hlula kweqela akwanelanga. Iipaki kufuneka zenziwe zenziwe kwinqanaba lomntu ngamnye ukuze zibe neziphumo ezinqwenelekayo nezona zilungileyo kwaye oku, ewe, kuthetha ukuba kukho isidingo sophando oluphezulu.
Ukubaluleka koPhando kuLuntu
Kungangumceli mngeni omkhulu - ukuba akunakwenzeka - ukuyenza ngempumelelo i-pitch ngaphandle kokwenza uphando olunzulu kuqala. Uphando lubalulekile, ngakumbi ngexesha xa iNtloko kaGoogle yangaphambili ye-Spam Matt Cutts ixoxa ngebhlogi yeendwendwe eziba 'ngakumbi nangakumbi ukuziqhelanisa nogaxekile'. Iibhlog zikhangela ngaphezulu; yenzelwe abantu abenze umzamo wokuba izimvo zabo ziviwe.
Nangona kunjalo, 'uphando', kulo mzekelo, ayisiyokukwazi nje igama lomntu kunye nokukwazi ukukhumbula isihloko seposti yebhlog yamva nje; imalunga nokungena kwimikhwa yabamkeli bakho kwi-Intanethi, ukhetho lwabo, kunye neencasa zabo kwibhidi yokuzibandakanya… ngaphandle kokubonakala kakhulu njenge-stalker ye-intanethi, ewe!
Iindlela ezi-4 zokwenza ii-imeyile zakho ziPhando
Xa kuziwa ekunikezeleni ebantwini kunye nokwenza uluvo lokuqala olomeleleyo noluxabisekileyo, kubalulekile ukuba abathengisi bangaweli kumgibe wokwenza okuqhelekileyo imeyile yokuthengisa iimpazamo. Imimango eyenziwe ngumntu inokuba nzima ukuba ilunge, kodwa ezi ngcebiso zi-4 zokwenza ii-imeyile zokufikelela zinokuphucula amathuba okuphumelela:
Yenza Umxholo weSifundo sakho Indawo yokuqala ukuqala kumgca we-imeyile yakho. Uphando lubonisa ukuba umgca wesifundo esenzelwe wena unakho konyusa amaxabiso avulekileyo ngama-50%, kodwa yeyiphi eyona ndlela ifanelekileyo yokongeza ukubamba kobuqu kwintloko yakho? Kule meko, ininzi malunga nokwenza umntu ngokobuqu kunokuzenzela ngokwakho. Ukongeza nje igama lomamkeli wakho kumxholo wesifundo sakho akuyi kuyisika. Ngapha koko, oku kunokuba yinto eyenzakalisayo njengoko ikhawuleze yaba sisiqhelo esisetyenziswa ziinkampani ezithumela ii-imeyile zentengiso ezingacelwanga. Endaweni yoko, zama ukugxila kwimvakalelo yezinto; Ukujoliswa komdla. Spin izimvo zomxholo ukuhlangabezana niche yomamkeli, kwaye khumbula: amagama amabini okuqala nawuphi na umgca wesifundo ubaluleke kakhulu! Umthombo womfanekiso: Neil Patel
Chonga ezinye izinto ezinokubakho Umgca wesifundo ayisiyiyo kuphela indawo apho kunokwenzeka ukongeza umnxeba wokwenza umntu kwi-pitch. Cinga ukuba ngaba akhona amanye amathuba okulungisa iphimbo lakho ukuze uzibandakanye ngcono nommkeli. Lixesha lokuba ubambeke kuphando. Umzekelo, akukho kukhethwa kwindalo yonke kuhlobo lomxholo. Ngelixa abanye bekhetha ukubona amanqaku, abanye bakhetha ukubonwa kunye nokunye ukubonwa kwedatha, abanye bakhetha imifanekiso kunye neevidiyo, abanye bakhetha ifomathi yokukhutshwa kweendaba. Unjani umamkeli? Ewe kunjalo, naluphi na unxibelelwano olubandakanyiwe kwibala lomsebenzi wakho kufuneka lubekhona kumdla womamkeli, kwaye uzame ukufaka amanye amagama abo kunye nethoni yelizwi kumxholo wakho. Umthombo womfanekiso: Ulwaphulo-mthetho
Yiya ngentla nangaphaya Ngamanye amaxesha, iingcebiso 1 kunye no-2 kuphela azonelanga ukubonelela ngethemba lokufikelela kuluntu olunamava apheleleyo. Kunganyanzeleka ukuba uhambe ngaphezulu nangaphaya ukuze ubonakale. Cinga ngokubhekisa kwizithuba ezifanelekileyo kwiiblogi athe umamkeli wabhekisa ngqo kuzo ngaphambili, okanye ukubhekisa kwizikhundla zabo zebhlog kumzamo wokunxibelelana neembono zabo. Mhlawumbi bade benze izindululo kweminye imithombo abanokuthi babe nomdla kuyo ngokusekwe kwiindlela abaziphethe ngazo kwi-Intanethi nakwizenzo zabo. Ukuba umamkeli usebenzisa ukubonwa okuninzi ukuze afumane inqaku lakhe, lingisa oku ebaleni. Ukusetyenziswa kwezikrini ezifanelekileyo, umzekelo, kunokunyanzela umamkeli ukuba aqwalasele ngakumbi.
Yenza uninzi lwezixhobo ezikhoyo -Akukho kuphika ukuba ukwenziwa komntu ngamnye kumntu ngamnye-ngokuchaseneyo nokwenziwa komntu kuluhlu lwabathengi olunamacandelo- kuthatha umzamo omkhulu abathengisi abaninzi abanaxesha lawo. Oku akuthethi ukuba iiposti ze-imeyile azinakuba zezakho. Ngapha koko, ii-imeyile zinokwenziwa zibe zezomntu kusetyenziswa izixhobo zokuthengisa ezizenzekelayo kwiinkalo ezininzi zenkqubo. Ezi zixhobo zinokukunceda ekuchongeni umdla webhlog ngohlalutyo lomxholo, kunye nokulandela zombini unxibelelwano olungenayo noluphuma ngaphandle ukwenzela ukuba abathengisi bakwazi ukubuyela ngokukhawuleza kwiincoko zangaphambili. Ngamanye amaxesha, kuye kufuneke ukuba zisebenzise ezi zixhobo zikhoyo ukuze kuqinisekiswe ukuba iphulo lokufikelela ebantwini liqhubeka ngokuqhuba kakuhle.
Ukufumana ibhalansi elungileyo
Ingcebiso yokugqibela elapha ngasentla, ngelixa iluncedo, ivula itoti enkulu yeentshulube. Ukwenza umntu yinto eyahlukileyo kwaye iyodwa, kwaye ukwenza ubudlelwane obomeleleyo ebantwini nakubantu ngokufuthi akunakufezekiswa ngempumelelo ngoomatshini abazihambelayo. Ukufumana ibhalansi elungileyo phakathi kwegalelo elenziwe ngesandla kunye nokufakelwa okuzenzekelayo kubalulekile ekuyileni iipaki ezizezakho ezikhuthazayo, ezibandakanya, kunye nokuguqula.
tags: emailUmxholo we-imeyilei-imeyile yokufikelelaukwenziwa kwe-imeyileinowuthi ye-imeyileukufikelelapr imeyilefikelelapr inqanabaUkunxibelelana noluntuinkundla yoluntu